SCIENCE TO SOCIETY: October 2012
बोका हैन कुभिन्डो
घुमी फिरी दशैँ आयो। यो पर्वको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको टन्न मासु खानु नि हो। संस्कृतिकै रुपमा बिकास भै सक्यो। अघि पछी महिनाको एकपटक मासु खानेले नि दशैको सेरोफेरोमै कम्तिमा 2-4 छाक त खान्छन होला। कसैले अरुले काटेको किनेर खालान अनि कतिले सिंगे काटेर खालान। अझै देबीको मन्दिरमा लागि बलि चढाएर। मेरो बिचारमा बोका बलि चढाएर कुनै धर्म हुने हैन। तर पनि मान्छेको आफ्नो विश्वास न हो, गर्छन। तर धेरैले पुजा गर्छन, बलि चाइ कुभिन्डोको। त्यस्तैमा हाम्रो परिवार नि पर्छ। बोका नचढाई कुभिन्डो चढाएकोले केहि फरक परे जस्तो लागेको छैन अहिले सम्म।
हुनत हाम्रो परिवार त्यति धर्म प्रति आस्था राख्नेमा पर्दैन। त्यस्तै स्कुलिंग भयो अनि त्यस्तैमा हुर्कियो। तर पनि बोका बलि नदिने हाम्रो परम्परा हो। न दशैमा न कुल पुजा (देवाली) मा। हुनत सन्यासी खलक भएर होला यस्तो परम्परा भएको। अन्य केहि सन्यासी परिवारले जनावर बलि दिने गर्छन। धार्मिक रुपले हो वा गरिबीको कारणले हो यस्तो भएको त्यो खोजबिनको बिसय होला। यस्तो किन भन्न मन लाग्यो भने, हाम्रो गाउमा धेरै जस्तोले गरिबीकै कारणले बलि दिन सकथेनन।
कारण जे भएनी, नेपालमै पनि धेरै जसोले बोका बलि दिन्छन जस्तो लाग्दैन। अघि भने कि हाम्ले कुभिन्डो बलि दिन्छम भनेर। बलि दिने बिहानै एउटा कुभिन्डो खोज्नु पर्थ्यो। कुभिन्डो घर वरी परि हुन्थ्यो। किन कुभिन्डो नै रोजाइमा पर्यो होल्ला कुन्नि? तर कहिले काही कुभिन्डो भएन भने, घिरौलो अथवा अरु तेस्तै तरकारीले पालो पाउथे। कुभिन्डो अलि डल्लो हुने हुनाले त्यसलाई बोका जस्तो बनाउन, काठका साना झिझा चारवटा घोचेर खुट्टा बनाउथिम। जब त्यो आफ्नै खुट्टाको भरमा उभिन्छ, अनि भेट्नो लाइ टाउको मानेर अक्षेताले पुजा गर्यो। त्यसपछि त्यसलाई काट्यो, दुइ टुक्रा हुन्छ कुभिन्डो। न घर भित्र (पुजा गर्ने ठाउँ) मा रगतको खोलो बग्यो न फोहोर। केटा केटि लाइ नि मानसिक रुपमा असर नगर्ने।
यदि तपाईलाई बोका बलि दिन मन छैन तर आफ्नो परम्परालाई जोगाइरन मन छ भने कुभिन्डोको आइडिया गजब हुन सक्छ।
Labels: culture, dashain, Nepal
कुनै पनि अनुसन्धानको नतिजा सार्बजनिक गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। हार्बड बिश्वबिध्यालयका प्रख्यात रसायनशाश्त्री प्रोफेसर व्हाइट्साइड् ले भन्ने गर्छंकी सार्बजनिक हुदैन भने त्यो अनुसन्धान नगरेकै सरह हो। यी प्रोफेसर संसारकै जीवित मध्ये ठुला बैज्ञानिक (living chemist with highest H index) मानिन्छन। मुख्यतया अनुसन्धानको नतिजा सार्बजनिक गर्ने भनेको सम्बन्धित जर्नलमा प्रकाशित गर्नु हो। यसरि प्रकाशित भै सके पछी सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य वैज्ञानिकले आफुले गरेको अनुसन्धानले मान्यता पाउनु पनि हो। त्यसै गरि कन्फेरेंसमा प्रिजेन्टेसन गरेर पनि आफ्नो कामको बारेमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। कसले कस्तो र कति अनुसन्धान गरेको छ भन्ने नाप्न उसले कुन जर्नलमा कति वटा पेपर प्रकाशित गरेको छ हेरेर नापिन्छ। तर यी दुवै प्रक्रियाले सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञलाइ मात्रै हुन्छ। सामान्य जनताले नाबुज्ने भाषा। अनुसन्धानको अर्को पाटोमा सर्ब साधारणलाइ अनुसन्धानको फाइदाको बारेमा बुझाउनु पनि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण छ, नेपालजस्तो देशमा अझै बढी।
खेतमा आलु लगायो भने आलु खान पाइन्छ, ब्यांकमा काम गर्यो भने पैसो चलाउन र कमाउन पाइन्छ तर यो ल्याबमा अनुसन्धान गरेर के पाइन्छ भन्नेहरु धेरै भएको देश/समाजमा ठुलो ठुलो र कम्प्लेक्स अनुसंधानको कुरो बुजाउन निकै गाह्रो छ।
लेखन भन्दा फोटो र फोटो भन्दा भिडियोले भन्न खोजेको कुरो सजिलो संग बुज्न सकिन्छ। आफुले बर्षौ लगाएर गरेको PhD अनुसन्धान एउटा पाँच मिनेटको भिडियोमा नृत्यको माध्यमले देखाउन पर्यो भने कसरि होला?
केहि वर्ष अघि देखि प्रतियोगिता भै रा छ। सर्बसाधारणले बुज्ने गरेर नृत्यको माध्यमले आफ्नो PhD अनुसन्धानको बारेमा ब्याख्या गर्ने। यसपालिको प्रतियोगिताको नतिजा बाहिर आएको छ। तलको भिडियो हेरम है त प्रथम भाको भिडियो। संयोगले यो रसायानाशास्त्रकै परेछ।
A super-alloy is born: The romantic revolution of Lightness & Strength from Peter Liddicoat on Vimeo.
अरु यस्ता भिडियो हेर्ने भए यहा क्लिक गर्नुस।
मैले नि सोची रा छु आफ्नो PhD लाइ कसरि डान्स गराउने होला भनेर। पक्कै नि यो धेरै गाह्रो छ। कुनै नेपालि तरिकाको नांचमा आफ्नो PhD व्याख्या गर्न पाए त क्या मजा हुदो हो गाठे।
यौटा नया जर्नल सुरु भा'रैछ, जसमा ठुला ठुला बिज्ञान भन्दा पनि गरेको कामको process को भिडियो पनि बनाएर प्रकाशित गर्नु पर्ने। Journal of Visualized Experiments. मलाइ त यो जर्नल खुब मन पर्यो।